ရွှေငွေ ရတနာ သိန်း(၇၅၀)ကျော် ဖောက်ထွင်း ခိုးယူသွားပြီးမှ. . သိန်း(၅၀၀)ကျော် ပြန်လာထားပေးသွားတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ဖောက်ထွင်းသူခိုး . – Let Pan Daily
ရွှေငွေ ရတနာ သိန်း(၇၅၀)ကျော် ဖောက်ထွင်း ခိုးယူသွားပြီးမှ. . သိန်း(၅၀၀)ကျော် ပြန်လာထားပေးသွားတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ဖောက်ထွင်းသူခိုး .
Let Pan | November 6, 2020 | Local News | No Comments
ခင်ဦးမြို့က အလွန်ထူးဆန်းတဲ့ ဖောက်ထွင်းမှု ရွှေငွေရတနာ သိန်း(၅၀၀) ကျော်ဖိုးပြန်တွေ့ပြီ .. စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ခင်ဦးမြို့နယ် ပင်တင်းကျေးရွာ၌ ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရသော ရွှေ၊ ငွေရတနာ တန်ဖိုးငွေသိန်း(၇၅၀) ကျော်ဖိုးမှ သိန်း(၅၅၀) ကျပ်ဖိုးခန့် ပြန်လည်ရရှိကြောင်း မြို့မရဲစခန်းမှ သိရသည်။ နိုဝင်ဘာ ၄ရက်နေ့ ည၉နာရီခန့်က ခင်ဦးမြို့နယ် ပင်တင်းကျေးရွာလမ်းဘေးရှိ ဝန်းထရံ၌ ချိတ်ထားသော မသင်္ကာစရာ အထုပ်တစ်ထုပ် တွေ့ရှိရကြောင်း.. ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ရဲစခန်းသို့အကြောင်းကြားသဖြင့် မြို့မရဲစခန်းမှူး ဒုရဲမှူးဇော်ဆွေ၊ နယ်ထိန်းခေါင်းဆောင် ဒုရဲအုပ် ကျော်လင်းဖြိုးတို့ ဦးဆောင်သော တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်..
၎င်းအိတ်ထဲမှ ရွှေထည်ပစ္စည်း ၂၂မျိုးနှင့် ငွေစက္ကူငါးထောင်တန်(၁)ရွက်၊ နှစ်ရာတန် (၁)ရွက်၊ တစ်ရာတန် (၂)ရွက်၊ ငါးဆယ်တန်(၂)ရွက်၊ ရွှေဘောက်ချာ (၇)ရွက်တို့အား တွေ့ရှိသဖြင့် ဖောက်ထွင်းဖိုးယူခံရသော ပစ္စည်းများ ဟုတ် မဟုတ် စစ်ဆေးနေစဉ် ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရသောအိမ်၏မြောက်ဘက် ကောက်ရိုးစဉ်အောက်ရှိ နွားချေးပုံဘေးတွင် ရွှေလက်ကောက် (၂)ကွင်းထပ်မံတွေ့ရှိရကြောင်း သိရသည်။ ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံထားရသော ရွှေ၊ ငွေ ရတနာ ပစ္စည်းမျိုးစုံ ၂၆မျိုး၊ တန်ဖိုးငွေ စုစုပေါင်းသိန်း (၇၅,၅၅၀,၀၀၀)ကျပ်မှ ရွှေထည်ပစ္စည်း (၂၃)မျိုး၊ တန်ဖိုးငွေ စုစုပေါင်း သိန်း (၅၅,၅၀၀,၀၀၀) ကျပ် ပြန်လည်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိနေသော ရွှေထည်ပစ္စည်း ၃မျိုး၊ ငွေ၈၃သိန်းကျပ်နှင့်အတူ တရားခံအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် အပူတပြင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ နိုဝင်ဘာ၁ရက်နေ့ နံနက်၉နာရီခန့်က ခင်ဦးမြို့နယ် ပင်တင်းကျေးရွာနေ ဒေါ်ညိုညိုဦးသည် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးဝင်းအောင်နှင့်အတူ လယ်တောသို့ သွားရောက်၍ ယောက္ခမဖြစ်သူဦးဘကြည်နှင့် မမာမာခိုင်တို့သည် ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ဥပုသ်စောင့်သွားရောက်ခဲ့ကြရာ နေအိမ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြပြီး အိမ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်၍ နေအိမ်အောက်ထပ်ရှိ အိပ်ခန်းအတွင်း ရှင်းလင်းရန် ဝင်ရောက်ခဲ့ရာ ၎င်းဒေါ်ညိုညိုဦးတို့၏အိပ်ခန်းနှင့် အိမ်အပေါ်ထပ်ရှိ မမာမာခိုင်အိပ်သည့်အိပ်ခန်း အခန်းတံခါးသော့များမှာ ပျက်စီးနေပြီး
အခန်းအတွင်းရှိ သံသေတ္တာအား ခတ်ထားသည့် သော့ကွင်းများမှာဖြတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရှိရသဖြင့် သေတ္တာများအား ဖွင့်ကြည့်ရာ.. ရွှေ၊ငွေရတနာ ပစ္စည်းမျိုးစုံ၂၆မျိုး တန်ဖိုးငွေ (၆၇,၂၅၀၀,၀၀)ကျပ်နှင့် ငွေစက္ကူရောရာ(၈,၃၀၀,၀၀၀)ကျပ်၊ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးငွေကျပ် (၇၅,၅၅၀,၀၀၀)ကျပ် ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရသဖြင့် ဒေါ်ညိုညိုဦး ပင်တင်းကျေးရွာ၊ ခင်ဦးမြို့နယ်နေသူက တရားလိုပြုလုပ်၍ နိုဝင်ဘာ ၂ရက်နေ့ နေ့ ၂ နာရီခန့်က ခင်ဦးမြို့မရဲစခန်းမှ(ပ)၃၅၆/၂၀၂၀၊ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ-၄၅၄ဖြင့် အမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ျမန္မာ မိဘေတြ ရဲ႕ သားသမီး ပ်ိဳးေထာင္ ျပဳစု နည္း အလြဲမ်ား
စစ္ကိုင္းမွာ ဧက တသိန္းေက်ာ္ သတၱဳတူးမယ့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ တင္ဒါေအာင္ျခင္း ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္
ကိုဗစ် နဲ့ စားဝတ်နေရေး ကြိုက်တာရွေး ဆိုတဲ့ အခြေအနေကို ကြုံတွေ့ရတော့ မှာလား?